Events | U.N.O.B
3rd Anniversary Invitation
Attention to all members and guests, The UNOB invites you to the 3rd Annual Anniversary. We hope you come and support our organization, and welcome anyone to beapart of this celebration. Elks Lodge #1352 6188 Belvedere Road, West Palm Beach, FL 33413 June 2nd. 2012 7:00PM TO 11:00PM Here is the invitation letter in PDF. Download (PDF, 315KB) Read More...
Chin Food Aid Concert (Florida) အစာရေစာပြတ်လပ်မှုကူညီရေးရံပုံငွေဂီတပွဲ(ဖလော်ရီဒါ) (more…) Read More...
Food Aid Concert
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်၍ အစာရေစာ ပြတ်လပ်ခေါင်းပါးမှုဒဏ် ကြုံတွေ့နေရသော ချင်းပြည်နယ် ဒေသတလျောက်ရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား ကူညီရန်အတွက် UNOB အဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် အတွင်း ရံပုံငွေ ဂီတပွဲ တစ်ပွဲပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆုန်သင်းပါရ်၊ ကဗျာဘွဲ့မှူး၊ မီးမီးခဲ၊ ထူးအယ်လင်း တို့အပြင် (more…) Read More...
Events, Picture Gallery
Congrat to the family of Ko Thi Han. မျိုးဆက်သစ် မျိုးဆက်သစ်ဟူသည် လတ်ဆတ်ခြင်း၊ လန်းဆန်းခြင်း၊ ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့် အားမာန်တို့၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါသည်။ မျိုးဆက်သစ်တို့၏ကောင်းခြင်းဖြင့် လောကကိုအလှဆင်ရပါသည်။ ကိုသီဟန် + မစန်းစန်း တို့၏သားလှရတနာ မောင်ဂေဘရီယဲလ်(Gabriel)သည်ကောင်းသောမွေးဖွားခြင်းမှသည် ကိုယ် စိတ် နှလုံး ကျန်းမာချမ်းသာမှုပြည့်စုံသော အသိညာဏ်ပညာထူးချွှန်ထက်မြက်သော လောကကိုအလှဆင်မည့် ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ ကောင်းသောဆုမွန်ဖြင့်ကြိုဆိုလိုက်ရပါသည်။ ကောင်းကြိုးပြည့်​ကြွယ် မောင်ဂေဘရီယဲလ် အသက်ရာကြော်ရှည်စေသောဝ် [nggallery id=15] Read More...
You’re in our thoughts Please know how much you are loved and how deeply your loss is felt by all. With Sincerest Sympathy ဒေါ်ခင်မာချို နာရေးသို့ရပ်ဝေး ရပ်နီးမှလာရောက်စာနာအားပေးကူညီကြသူများနှင့် နာရေးအကူလှူငွေထည့်ဝင်ကြသူအားလုံးကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းကို နာရေးတက်ရောက်အားပေးကူညီခဲ့ကြသောUNOBအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် အသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါကြောင်းသတင်းပါးအပ်ပါသည်။ [nggallery id=14] Read More...
We have celebrated baby shower party at Ma May Kha’s place on (Nov/2009). အိမ်ရှင် မမေခ နှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြသောအမျိုးသ္မီးများ၊ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ကြသော ပရိတ်ဿတ်အားလုံးကို မစန်းစန်း နှင့် မသူဇာတို့က (more…) Read More...